SD07025 70x70x25mm 70mm 7cm 12V DC borosy c ...
SD09232-1 92mm 12v 24v 48v dc mpankafy motera 9232 90 ...
SA22580-1 230V AC Ventilat Indostrialy tsy misy hery ...
2020 vidiny ambongadiny 70mm Ec Fan - EC FAN SE17 ...
Fanehoana avo lenta toy ny Ac - SA18060 indust ...
Izahay dia manolo-tena amin'ny fampandrosoana, famokarana ary fivarotana fahombiazana avo lenta, kalitao azo antoka ary ny vidin'ny fifaninanana amin'ny mpanjifa rehetra.
Ny vokatray dia nandalo fanamarinana fiarovana iraisam-pirenena amin'ny firenena sy faritra maro toa ny: UL, CUL, TUV, CE, CCC, IP55, ROHS, sns.
Amin'izao fotoana izao dia misy mpiasa maherin'ny 200, ny velarantany dia 8000 metatra toradroa, ary manodidina ny 6000KPCS ny vokatra famokarana isan-taona.
Speedy dia mihaino hatrany ny mpanjifany amin'ny fampandrosoana hatrany, fanavaozana ary famolavolana vokatra vaovao.
Shenzhen Speedy Technology Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2003. Any amin'ny tranobe 6, faritra indostrialy Juntian, Shahu Village, Pingshan Town, Distrikan'i Pingshan vaovao any Shenzhen no misy azy ankehitriny. Mpanamboatra fivarotana fivarotana sy vokatra miaraka amin'ny velaran-tany mihoatra ny 10.000 metatra toradroa ary mpiasa mihoatra ny 400. Ny fitantanana ny orinasa dia nandalo ISO-9001 (2008) fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena.
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana mpankafy fampangatsiahana DC, mpankafy fampangatsiahana AC, ary taratra radiatera ny orinasa Ny vokatra dia mety amin'ny fitaovana, milina ary fitaovana, solosaina CPU, chassis herinaratra ary karatra sary izay mila fanaparitahana hafanana na rivotra. Ny vokatra dia nandalo ny Rohs, CE, UL, CUL, TUV, FCC, CCC, CQC ary fanamarinana hafa, ary ny vokatra dia aondrana any an-trano sy any ivelany.
Ny fifehezana kalitao sy ny fampandrosoana ny vokatra no fototry ny maodelin'ny orinasa Speedy. Speedy dia mihaino hatrany ny mpanjifany amin'ny fampandrosoana hatrany, fanavaozana ary famolavolana vokatra vaovao. Vonona foana izahay hanome ny vahaolana mangatsiaka tsara indrindra ho an'ny mpanjifa rehetra.
Marihina fa tsy miresaka momba ny mpankafy indostrialy momba ny vokatra vita (toy ny fampangatsiahana sy ny rivotra ...
Famaritana fohy momba ny mpankafy EC
EC mpankafy dia vokatra vaovao amin'ny indostrian'ny mpankafy. Tsy mitovy amin'ireo mpankafy DC hafa io. Tsy vitan'ny hoe mampiasa herinaratra herinaratra DC fotsiny izy, fa koa misy herinaratra AC ...
1. Fitsipika miasa: Ny fitsipiky ny fiasan'ny mpankafy DC: amin'ny alàlan'ny alàlan'ny herinaratra DC sy ny fampidirana electromagnetic, miova ny angovo elektrika ...
12cm Ac Axial Fan, Guard Fan Plastika, Hvac Fan Puller, Metal Grill Fan 80mm Guard, 172mm Ac Axial Fan, Metal Fan Guard,